IDowns seyiphupha nge-treble kwiPSL - Ilanga News
Home Ezemidlalo IDowns seyiphupha nge-treble kwiPSL
YiPirates kuphela esenalowo mlando
ABAQEQESHI beSundowns efuna ukunqoba i-treble. Kusuka kwesobunxele nguSteve Komphela, uRhulani Mokwena noManqoba Mngqithi.
IMAMELODI Sundowns ine-phupho lokuhamba ezinyathe-lweni ze-Orlando Pirates ngokunqoba izindebe ezintathu ngesizini eyodwa (treble) kwezidlalelwa ngaphansi kwePremier Soccer League (PSL).
AmaBrazilian aqophe umlando kule sizini njengoba enqobe okokuqala ngqa isicoco seMTN8 selokhu le nkomishi yaxhaswa yile nkampani yamaselula. Ibisinqobe zonke izicoco ngokwahlukana kwazo ezingaphansi kwePSL kodwa ilokhu ishweba iMTN8.
Ukuvula kwayo ngeMTN8 kule sizini sekuyibeke endaweni enhle yokufeza leli phupho layo njengoba ibukeka ingenaye untanga kwi-DStv Premiership.
Igijima ingcwenga yodwa yebhola ekhumbuza abaningi iqembu lesizwe laseBrazil ngesikhathi kusa-dlala abadlali okubalwa kubona uDunga (owayengukaputeni), uRivaldo, uCafu, uDenilson, uBebeto ukukha nje phezulu.
Lesi sikwati sasilithunga ibhola kube sengathi sisejimini, izitha zilandela izithunzi, okuyinto eyenziwa ngabafana bakaManqoba “TV” Mngqithi oyinhloko yabaqeqeshi beDowns.
UMngqithi utshele ILANGA izolo ngeSonto emini ekubo eMzimkhulu, ukuthi kuyisifiso sabo esikhulu ukushanela zonke izicoco ezidlalelwayo kwiPSL.
“Singakujabulela kakhulu uku-nqoba izicoco ezintathu. Kodwa-ke okumele singakukhohlwa wukuthi kusafanele silwe enkundleni ukufeza leli phupho. Ngeke kube lula kodwa siphokophele ukuzama uku-zakhela umlando wethu,” kusho uMngqithi.
Uthi bazimisele nangokuhamba ibanga elide kwiCaf Champions League njengoba sebesesigabeni samaqoqo salo mqhudelwano othathwa njengomkhulukazi kwedlalelwa ngamakilabhu ayizindlo-ndlo emaligini ase-Afrika.
Uthi kungaba kuhle ukunqoba inkanyezi yesibili etholakala ngo-kuwina lo mqhudelwano.
Uncome ikhefu leFifa ukuthi libasizile bakwazi ukuyohlala nemindeni yabo emuva kwesikhathi eside insimbi ishisa ezandleni.
“Sizoqala ukujima ngoMsombuluko (namuhla) emuva kokunika abadlali ikhefu lezinsuku ezine. Ngikholwa wukuthi libasize ka-khulu,” kusho uMngqithi.
Uthi ujatshuliswa wukubuya kwabadlali bakhe abebelimele uRivaldo Coetzee, uMothobi Mvala kanti uLebohang Maboe kusekubi kuyena.
Previous articleUsabhacile undlunkulu kaJG Shembe
Next articleKuboshwe nommeli kweletulo lokusocongwa kobeyimeya